Kunconywa ukuziphatha kahle kwabe-EFF | News24
Kunconywa ukuziphatha kahle kwabe-EFF
South Africa –Ukuzithiba yikona okusebenzela abe-Economic Freedom Fighters (EFF) ngesikhathi kubhaliselwa ukuvota ngempelasonto, kubika iSowetanlive.
Ayikho imibiko eziveziwe yokungaziphathi kahle kumalungu aleli qembu kule mpelasonto.
Oqokelwe ukuba usomlomo waleli qembu njengoba kulungiselelwa ukhetho likahulumeni wasekhaya uVeronica Mente uthe kumele kubongwe amalunga aleli qembu asebenza ngezokhetho, “ngokungavumeli ukusatshiswa kuba nqande ekwenzeni umsebenzi walo mbutho”.
OLUNYE UDABA: Intsha emnyama ayiwethembi amaqembu ezombusazwe
“Akulula ngaso sonke isikhathi ukuzibamba uma uchukuluzwa,”kusho yena futh uqhubeke wathi “Abantu baseNingizimu Afrika bayakujabulela ukuziphathi kahle kwamalunga eqembu lethu yize izitha zibachukuluza zibahlokoloza”.
UMente uthe, “baningi abantu abajoyine leli qembu njengamalunga amasha kanti kwamanye amagatsha inani labantu abajoyinile liphindaphindwe kabili noma kathathu”.